लाहुरिनी मन पराउनेले आफ्नी स्वास्नीलाई १ महिना रत्नपार्क पठाएर फेरि र्विवाह गर ! मुकुन्द घिमिरे - " सुलभ खबर "
लाहुरिनी मन पराउनेले आफ्नी स्वास्नीलाई १ महिना रत्नपार्क पठाएर फेरि र्विवाह गर ! मुकुन्द घिमिरे
मुकुन्द ल्याण्ड बनाउछु भन्दै हिड्ने विश्लेषक मुकुन्द घिमिरेले यतिबेला भाइरल लाहुरे लाहुरेनीले गरेको पुनः बन्धनलाई कटाक्ष गरेका छन् उनले कटाक्ष गर्दै लेखेका आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन् कि लाहुरिनी मन पराउनेले आफ्नी स्वास्नीलाई १ महिना रत्नपार्क पठाएर फेरि र्विवाह गर !
राहुल-स्मिता पुनर्मिलनबारे महावीर पुनले समाजका कलंकहरुको नाश होस् भन्दै किन दिए यस्तो प्रतिक्रिया !
१ महिनाको लामो खोजतलास पश्चात श्रीमती भेढ्दा मात्रै पनि राहुलको मनामा शान्ति भएको थियो । माईती परिवारबाट छोरीको चिन्ता गरिरहेको माईती परिवारले छोरी तत्काल खोज्न अनुरोध गरिरहेका थिए । अन्तवार्तामै उनले माइती पक्ष बाट टेन्सन भईरहेको बताएका थिए । राहुलले जाहाँ छौ जस्तौ छौ हामिलाई जानकारी गाराउ हामिलाई ढुक्क त हुन्छ भनेर अन्तरवार्तामै पनि श्रीमतीलाई अनुरोध गरेका थिए । राहुलको बिभिन्न चिन्ता मनमा खेलीरहेको थियो । काहाँ के बनायोकी यसको दोष आफुमा आईलाग्ने होकी भन्ने बिषयले टेन्सन भएको उनले जसरी पनि कन्ट्याक्टमा आउन श्रीमतीलाई अनुरोध गरे ।
राहुल र अस्मिताको भन्दा पनि ३ बर्षिय छोरीको भबिष्यका लागि एक महान लाहुरेले फेरी पनि आफ्नो श्रीमतिलाई साथ दिने निर्णय गरे । यो निर्णयले छोरीको मायामा ब्याप्त रहेको राहुल र अस्मिताको दम्पती परिवार मात्रै नभई समाजमै खुसीको ओईरो छाएको छ । अझै यस्तै पिडित पात्रहरु त धेरैनै भावुक र खुसी भएको छन् ।
राहुल र स्मिताको दम्पतीलाई पालुङटार नगरपालिका ९ का वडा अध्यक्ष भेषराज पाण्डेले खादा लगाईदिएर पुनर्मिलनको लागि बधाई दिएका छन् । आज समाजका एक महान जोडिएको रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दै राष्ट्रमै यो उदाहरणीय कार्य रहेको अध्यक्ष पाण्डेले बताए । पाण्डेले दुवैजनालाई पुनरर्मिलनको संज्ञा दिदैँ शुभकामना व्यक्त गरे । अध्यक्ष पाण्डेले ‘बिषेशगरी उहाँहरुको बच्चाका लागि पुनर्मिलन जोड गरेको बताए । हामीले देखाउनका लागि मात्रै की मनबाटै हो ? भनेर दुवैलाई सोध्दा दुवैबाट स्वीकार्न राहुल र स्मिता मन्जुर भए, त्यसपछि हामिले पुनर्मिलन गराएको छौ अध्यक्ष पाण्डेले भने ।’
३ बर्षको छोरीसमेत भएकी स्मिताले परपुरुषसँग भागेपछि तनावमा रहेका राहुलसँग बिवाहको प्रस्ताव गर्दै धेरै युवतीले प्रस्ताव समेत गरेको बताइएको थियो । तर शुक्रबार राहुल र स्मिताबीच नै पुनर्मिलन भएको छ । उनीहरुबीच पुनर्मिलन भएपछि सोही वडामार्फत विवाह दर्ता गराइएको हो । त्यस्तै लाहुरे दम्पतीको पुनर्मिलन भएपछी राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रका अध्यक्ष डा.महावीर पुनले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । पुनले लेखेका छन्
बिस्तृत रुपमा सबै कथा ता पढ्न पाएको छैन तर अन्तिम कुरा बुझ्दा यो राहुल भाई ज्यादै बिशाल हृदय भएको मानव रहेछन भन्ने कुरा पक्का भयो र यस्ता मान्छे करोडौमा एक दुइ जना मात्र हुन्छन । यस्तो निर्णय गर्ने साहस साधारण मान्छेलाई आउंदै आउंदैन अनि स्मिता बहिनीले पनि भुल स्वीकार गरेर गल्ती बाट पाठ सिकेको बुझियो, त्यो पनि असल मानिसमा हुनै पर्ने गुण हो । एक जना मान्छेले जीवनमा हजारौं गल्ति गर्छ तर त्यो गल्ति बाट पाठ सिक्ने हो भने गल्ति गरेकोमा केहि फरक पर्दैन बरु फाइदा नै हुन्छ । दुबैको जय होस् र समाजका कलंकहरुको नाश होस् ।
आज २०७७ माघ २७ गते मंगलबारको राशिफल
दुवै हात खुट्टा नचल्ने बिक्रमसंग मनुले गरिन धुमधामसंग बिहे
अब ६ जना नै जे’ल जाने दाइको न्या’यका लागि ल’डेकी सदिच्छा सफल यस्तो हुदै….